Ku hel xirmadan dhameystiran ee saameynta qoraalka 90% dhimis | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Design Graphic, Fuentes
Maanta waa inaan ku helnaa awoodeena dhammaan noocyada saamaynta qoraalka ah si aad uhesho xirfad wanaagsan oo sidaa darteed ma diidin nooc kasta oo shaqo ah oo macmiil kasta na weydiiyo. Tan awgeed waxaan ku heynaa xirmooyin qoraallo saameyn ku leh Photoshop sida midka ay bixiso degelku qiimo dhimis dhan 90%.
Gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa dhimista qiimaha 195 ilaa 19 dollars, sidaa darteed haddii aad rabto inaad yeelato saameyn qoraal oo tayo sare leh, wax xun ma noqon doonto haddii aad ku istaagto inaad barato iyaga meel u dhow. Runtu waxay tahay inay ku jirto mawduucyo kala duwan iyo naqshado si aan u helno maktabad aan ugu tagno nooc kasta oo macmiil ah. Marka ha ka raagin joojinta iyo la kulanka iyaga. Iyo hadaad rabto ka faa'iideyso sicir-dhimistaan ​​90% ah waa inaad halkan gujisaa oo aad wax iibsataa.
1 Mawduucyada ku jira qoraalka saamaynta loogu talagalay Photoshop
2 Xidhmada ugu horeysa ee saameynta: 3D Casri ah «Glamour»
3 Qayb kale oo saameyn ah: baraf
4 Gowasome ilaa 3D
5 3D Wood: oo ha moogaanin qoryaha xirmadan
6 Noocyada Birta Photoshop
7 Habka guridda: markii gabowgu weli ku jiro moodada
8 Saamaynta qoraalka dhalaalaya: marka qoraalka iftiimayo in ka badan inta kale
9 Saamaynta Qoraalka ee Adobe Photoshop: Volcanic
Mawduucyada ku jira qoraalka saamaynta loogu talagalay Photoshop
Sidii aan horayba u sheegnay, wax weyn ayaad heli doontaa nooc kasta oo saamayn qoraal ah loogu talagalay Photoshop. Waxaan ku qiimeyn karnaa dhammaan waxyaabaha aad ka heli doontid sidan:
Saamaynta qoraalka Premium ee Photoshop.
Aad bay u yihiin fudud in la astaysto mahadsanidiin lakabyadeeda kaladuwan ee kuu oggolaan doona inaad u saxdo sidaad rabto.
Waxay si fiican loogu hagaajin karaa nooc kasta oo font ama qaab ah, si aad ugu dhexgeli karto shaqadaada dhib la'aan.
Mid kale oo ka mid ah dhinacyada ugu wanaagsan: waad awoodaa u beddelo qoraalka tooska ah 3D oo leh qaar ka mid ah saameynta ugu badan ee xirmadan loogu talagalay Adobe Photoshop.
100% la qiyaasi karo.
Faahfaahinta kale ee xisaabta lagu darsado si u isticmaal sidaan rabno taasina waxay na siin doontaa qaddar aad u tiro badan oo ku saabsan saamaynta qoraalka ee Adobe Photoshop. Kuwani waa:
Waqtiga wax iibsiga gacanta waad ku haysan kartaa dhammaan saamaynta qoraalka si loogu isticmaalo barnaamijka aad ugu jeceshahay sida Adobe Photoshop.
Dhamaan faylasha waxaa loo diraa qaab PSD oo u baahan Photoshop CS5 ama ka dib.
Dhammaan saamaynta qoraalka ayaa loo isticmaali karaa labadaba ganacsi iyo ujeedo shaqsiyeed. Si kale haddii loo dhigo, waxaad haysataa dhammaan xorriyadda adduunka ee aad ku samayn karto waxaad doonto; sida taxanahan sawir ah ee leh dadweynaha loo sii daayay Maktabadda Dadweynaha ee New York.
Xidhmada ugu horeysa ee saameynta: 3D Casri ah «Glamour»
Qeybtii ugu horreysay ee saamaynta qoraalka ee Adobe Photoshop waa "3D Modern Smart object" oo timaadda si loogu beddelo qoraal cad mid 3D ah iyadoo joogitaan layaableh. Taasi waa, waxay u rogi doontaa qoraal midab caadi ah mid 3D ah oo leh midab weyn iyo dhalaal. Nooc ka mid ah saamaynta qoraalka ee ku habboon kaararkaas ama boodhadhka dhammaadka sannadka ama in badan oo "soo jiidasho leh" leh.
Saamaynta qoraalka waxaa la socda afar sooyaal oo u eg rhomboid in la siiyo joogitaan dheeri ah qoraalkaas ku labisan "soo jiidashada" isla markaana geliya iftiin weyn. Waxaa jira nashqado iyo midabbo kaladuwan oo gacmaheenna ku kala duwanaan kara. Sparkles ayaa sidoo kale lagu soo daray si loo siiyo "soo jiidasho" badan qoraalka aan ugu baahanahay tigidhadaas xaflad gaar ah ama dabaaldega dhamaadka sanadka.
Qayb kale oo saameyn ah: baraf
Una taxanaha saameynta barafka Waxaa loo isticmaali karaa mowduucyada kirismaska ​​ama in lagu soo bandhigo cabitaan qabow ama jalaato xagaaga. Waxaan gacanta ku haynaa saameyn badan oo baraf ah oo ku xiran gacmaheena taas oo kuxiran baahiyaheena, sidaa darteed waxba kama waayi doontid qaybtaan saameynta ah.
Guud ahaan waxaan haynaa:
3 noocyada cabirka kaladuwan ee saameynta barafka.
8 burush baraf si loo shakhsiyeeyo abuurkeena
2 nooc oo ah barafka saameyn ku leh "rinjiga" qoraalka aan wax ka bedelnay.
3 burushyada qiiqa in la siiyo "baraf" ah taabashada deegaanka oo laga dhigo kaarka ama boodhadhka loo sameeyo macmiilka si macquul ah.
Xallinta tayada sare leh: xitaa marka la weyneeyo saameynta waxaan arki karnaa inaysan lumin wax xallin iyo fiiqid ah.
Lakabyo hufan si aan ugu isticmaalno saamaynta qoraalka meel kasta oo aan dooneyno oo si fiican loogu dhex daray shaqadeena naqshadeynta.
Saamaynta qoraalka barafka ee kaladuwan si aan si hagaagsan ugu habeyn karno jumladaha aan rabno.
Waxay ku noqon doontaa guji kaas oo aan ku leenahay naqshad ama mid kale oo aan ku jecel nahay oo aan ku doorbidno.
Iyagu waa xirfadlayaal waxayna ku siin doonaan buuggaaga a noocyo kala duwan oo saameyn qoraal ah iyada oo loogu darayo dhammaan noocyada mawduucyada laga soo bilaabo farxadda la xiriirta kirismaska ​​illaa xayeysiinta cabitaannada la qaboojiyo. Wax yar oo hal abuur leh iyo faham ku saabsan naqshadeynta waxaa lagu dari karaa xayeysiin kasta, xayeysiin ama waraaqo.
Gowasome ilaa 3D
Dufcadan saamaynta qoraalka ah ayaa sidoo kale ka mid ah taxane ah 12 oo 3D ah taas oo ka duwan kuwii hore, waxay leedahay doorbid wax ka sii heer sareeya, dhalinyaro iyo halis ah, in kasta oo iyada oo aan loo haynin raadadka hal-abuur ee mid kasta oo ka mid ah. Waana in saamayntan qoraalka ay runtii ku fiican yihiin naqshadeynta si aan u haysano 3D-kaas oo keenaya qoraal gaar ah.
Waan awoodnaa la xiriira wax aad u Mareykan ah iyada oo aan la iloobin taabashadaas caadiga ah ama guridda ee kudarsanaysa noocyo badan. Sida kuwa kale, waxaad u rogi kartaa qoraal fudud oo ah midka 3D oo leh joogitaan muuqda oo iskiis u taagan.
In badan waxaan gaarnay saameynta qoraalka 12 guud ahaan waxaa loogu magac daray "Gowasome". Ma helno burush ama qaabab saameyn oo aan ku rinjiyeeyno qoraalka aan sameyn doonno, laakiin waxaan ogaaney in mid kasta oo iyaga ka mid ah si aad u wanaagsan loogu qaabeeyey qaybteeda.
Waxaan iftiimineynaa mid ka mid ah «Iskuulka» loogu talagalay kuwa hooska gudaha iyo dibedda ah si qoraalka loo siiyo naqshad gaar ah oo aad u "Mareykan ah".
3D Wood: oo ha moogaanin qoryaha xirmadan
Iyo xirmadan qaabka alwaaxa looma waayin si qoraalkaas loo siiyo saameyn dabiici ah. Saamaynta qoraalka ee tayada sare leh ee 300 DPI marka fiiqnaanta waa mid aad u fiican xitaa haddii aan balaadhino ma waayi doonto iota xallinta.
Este 3D dufcaddii ujeeddooyinka qoraalka waxaa badanaa lagu gartaa sababaha soo socda:
6 nooc oo qaabab ah: Nutdark, Cherrywood, Oak, Alder, Appletree iyo Oakwood.
Mid kasta oo ka mid ah qaababku wuxuu ku jiraa xallinta 2000 x 1600 pixels iyo 300 DPI. Marka waad ku samayn kartaa waxaad rabto.
Boolal qoryo ah- Tixraacyo taxane ah oo si qumman u shaashanaya boolal qoryo ah. Markaa sida loo ogaado sida saxda ah ee loo meeleeyo waxay siin kartaa saameyn aad iyo aad u qurux badan guud ahaan.
Si fudud loo isticmaalo: mahadsanid ficilada waxaad u badali kartaa dhammaan noocyada qaababka gabal aad u fiican oo alwaax leh xarrago weyn.
3 nooc oo 3D ah: markaa waxaad siin kartaa hooska aad rabto inaad siiso mid kasta oo ka mid ah qoraallada la dabaqay oo qoto dheer.
18 nooc oo wadar ah alwaax 3D ah: qaababka waxaa lagu dabaqi karaa qaababka qoraalka iyo joomatari labadaba.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee ka mid ah xirmada qiimaha sare ee saameynta qoraalka ee Photoshop. Hadaad raadiso sii taabasho gaar ah qoryaha websaydhka ama shaqada macmiilka, dufcadani waa in ka badan sidii ay ahayd ilaha aasaasiga ah.
Noocyada Birta Photoshop
Saamaynta qoraalka biraha laguma waayi karo xirmadan, kuwaas oo badiyaa ay aqbalaan tiro badan oo nashqadeeyayaashu. Biraha sida dahabka, qalinka, naxaasta, Nooca "grunge" ama ranjiga ayaa ah qaababka qaar ka mid ah noocyada ay ku jiraan xirmadan qoraalka.
Sidoo kale ma jiraan biro cayiman oo taas waxay ka qaadaan faahfaahintaas inay ka baxaan hadal kasta ama halkudhig websaydh laxiriira muusikada birta. Iyo taxane kale oo saameyn qoraal ah oo sifiican u weheliya kuwa birta ah si ay u siiso dhalaal ku filan ugana istaagaan si fiican.
Guud ahaan saameyntani waa liiska oo dhan:
12 saameyn bir ah: la safeeyey, xawaaraha, chroma, dahab, cows, bir, dhuxul, naxaas, mesh, godad, daxalaystay iyo midab.
15 saamaynta birta: birta, birta, chroma, xariijimo, meel, miridh ah, siddooyin, duug, xariiqyo, la safeeyey, summad, madow, hawl iyo mesh
12 premium 3D: dagaalyahan, filim, xoog, Delta, xad dhaaf ah iyo wax ka badan oo loogu talagalay taxane tayo sare leh.
12 saamaynta iftiinka.
3 Saameynta Dahabka: Ma seegi kareyn seddex saameyn qoraal oo laxiriira dahabiga si aad u sameyso hadaladaas laxiriira abaalmarinta iyo inbadan oo aad moodo inaysan jirin.
18 saamaynta birta HQ: gaar u ah astaamaha sida kuwa shabakadaha bulshada si loo kala saaro websaydhkayaga ama kaarkaas ganacsi ee macmiilkaas gaarka ah.
Qayb ka mid ah kuwa badan waxay si fiican u wadaagaan midba midka kale waana inaan ogaanno sida ugu wanaagsan ee aan isugu dari karno si aan u helno ujeedkooda oo dhan. Gaar ahaan kuwa iftiinka ayaa kufiicnaan doona qofkasta, inkasta oo kuwa ifaya ay sifiican ugafiicnaan doonaan kuwa laxiriira biraha duugoobay ama daxalaystay.
Waxaa jira xirmo kale oo bir ah, in kasta oo loogu talagalay ujeeddo kale oo leh codad madow oo aan sidaa u dhalaalayn. Haddii aad isticmaasho mid ama kan kale waxay ku xirnaan doontaa baahiyahaaga, in kastoo wixii la sheegay, dhammaantood ay yihiin tayo gaar ah iyo xallin sare. In kasta oo ay tahay in la sheego in dufcaddan oo qaab yar ka duwan, awood u yeelan karto u adeegso "dharka" astaamaha warbaahinta bulshada sidaa darteed waxay uga soocan yihiin degellada kale.
Habka guridda: markii gabowgu weli ku jiro moodada
Baakadani sidoo kale kama maqna taabashadaas guridda ah si ay u aaddo goobo kale oo ku saabsan naqshadeynta iyo saameynta qoraalka. Iyagu ma ay doonaynin inay illoobaan inay isticmaalaan saamaynta qoraalka si ay ugu beddelaan kuwa qoraallada caajiska ah caajiska wax u habboon la xiriir xafladda xagaagaao si aad u tusto cunto karis ka mid ah kuwa ka soo baxa luul marka kuleylka ku dhaco.
Astaamaha xirmooyinka qaabka guridda ee Photoshop-ku waa:
37 nooc guud ahaan: ma jiro qaab guridda oo looga tago dhuunta, sidaa darteed waxaad heli doontaa dhammaan ilaha kuugu filan dalab kasta oo shaqo.
Si buuxda loo tafatiri karo: waad u habeyn kartaa iyaga sida aad ugu qanacsan tahay xitaa inaad siiso taabashadaas gaarka ah ee aad ogtahay sida loo uur-galiyo shaqadaada qaabeynta.
Waxay la shaqeysaa font kasta iyo qaabab ama vector: waxay noqon doontaa arrin guji si aad u siiso qoraallada fidsan nooc kasta oo ka mid ah 37 nooc oo guridda ah oo aad ku haysato xirmadan qoraalka ee saamaynta leh.
Qaab PSD ah.
PSDs tayo sare leh.
Aad ayey u fududahay in la isticmaalo: wax laga dhaho arrintan maaddaama ay tahay is-sharrax. Hal guji iyo sixir.
Waxaanan ku haysannaa habab kasta oo suurtagal ah oo had iyo jeer la xidhiidha eraygaas "guridda". Tan iyo markii midabkiisu casaan u yahay «pinky» kaas oo geesaha loo hibeeyay cillad ka tarjumeysa qoraalka oo xoogaa 3D ah, xitaa "retro" taas oo codka buluugga ah uu si fiican ula socdo casaanka.
Waxa kale oo jira qaar badan oo "grunge" sida hadaan duurka galbeed ku jirno iyo in loo muujiyey noocyada nashqadahaas ee u baahan xoogaa ka mid ah waxaas "Mareykan" ah. Waana in 37-kan nooc ay awoodaan inay u rogaan qoraal kasta oo xayeysiin ama xaashi ah wax aad u nasteexo leh, oo midabkiisu ka buuxo iyo nolol badan. Qaab guridda oo ka duwan inta ka hartay saamaynta qoraalka ee aan illaa hadda aragnay, markaa waxay ka dhigeysaa xirmada mid aad u dhameystiran oo aan waxba ka maqnayn; gaar ahaan qiimaheeda in la dhimo boqolkiiba 90.
Saamaynta qoraalka dhalaalaya: marka qoraalka iftiimayo in ka badan inta kale
Kuwaas saamaynta qoraalka dhalaalaya hore ayaynu u naqaanay iyaga wax badana waan ka dhihi karnaa. Waa cadaalad oo way fududaan karaan inay gutaan waajibaadkooda: si looga dhigo inay u muuqdaan kuwo ka badan qaybaha intiisa kale ee aan ku biiri doonno degel, xayeysiin ama warqad.
Wadar ahaan waxaan ku sii jirnaa waxyaalahan oo dhan tan oo dhan:
Iftiimiso saameyn gaar ah.
Si fudud loo isticmaalo hal guji.
Si buuxda loo tafatiri karo.
Waxay la shaqeysaa nooc kasta oo font ah.
Saamaynta Qoraalka ee Adobe Photoshop: Volcanic
Dabkuna wuxuu la wareegayaa saameyntan qoraalka ah sidaas darteed noqo mid si weyn u garaacaya. Ahaanshaha mid qaas ah, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la ogaado sida loogu adeegsado qoraalka xayeysiinta ee la xiriira dabka iyo ololka. Waana in taxanahan qoraalka lafaha loogu talagalay ujeeddo gaar ah.
Guud ahaan waxaa jira 8 saameyn qoraal ah:
Lava: sida magaceedaba ka muuqata, lafaha ka soo baxa fulkaanaha si loo siiyo qoraalkaas xoogga dabiiciga ah.
Hack: oo leh cod aad u kacsan, xiddigo madow oo qaabkan lafaha ah oo si fiican uga duwan kuwa kale.
Dabka: ama dab, qoraalkan saamayntiisa waxaa jecel silhouette ololkeeduna ku wareegsan yahay.
Gubo: Saamaynta qoraalka oo xarafku umuuqdo ilbiriqsiyo gudahood sababo la xiriira saamayn gubasho oo aan dabiici ahayn.
Lake: ama harada dabka, saameyn kale oo fulkaaneed oo saameyn ku leh taas oo magma si tartiib tartiib ah uga soo qulquleyso wabiyada lava ee volcano lafteeda.
Digniin: foojignaanta halka dabku u gudbay si ay u qaabeyso birta oo halkan lagu metelo iyada oo cad oo midabbada qayb ka mid ah ka muuqata.
Ular: Saamaynta kale ee fulkaanaha oo ay weheliso joogitaan weyni taasna way kaga duwan tahay inta kale adoo waxoogaa xallinaya.
Gaaban, sideed saamaynta qoraalka volcanic taasi waxay lahaan doontaa boosaskooda shaqooyinka qaaska ah, laakiin waxaan marwalba ku haysan doonaa gacmaheena si aan uga baxno codsiyadaas ay macaamiisha mararka qaarkood codsadaan taas oo naga dhigaysa inaan yara waalanno. Xidhmadan qoraalka ah ee saamaynta qoraalka ahi waxay leedahay noocyo aad u tiro badan oo dufcadani way muujineysaa.
Iyada oo dhammaan waxyaalahan badan ee tan ku jira xirmo ah saamaynta qoraalka ku dari doonaa wax badan oo tayo leh iyo qiimo ka badan diidmada: $ 19 oo qiimo dhimis 90% ah. Marka waxaan ka hadlaynaa xirmo in qiimaheeda caadiga ahi yahay 176 doolar. Haddii aad wakaalad leedahay, ha seegin ballanta xirmadan qoraalka ee saameynta ugu badan ku leh sida guridda, birta, volcano, dhalaalka, laydhka ama qoryaha iyo kuwa kale oo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Soo bandhigid aan la inkiri karin: Saamaynta qoraalka Photoshop waxay ku xiran tahay 90% off